China Ọkụ Eaton China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọkụ Eaton - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 19 Ngwaahịa maka Ọkụ Eaton)
150W Ọkụ ọka Bulb Mmiri na-anọchi anya HPS 400W
150W Ọkụ ọka Bulb Mmiri na-anọchi anya HPS 400W Gini bu oka oka? 150W LED Corn bulbs bụ ọhụrụ na ikanam Technology. Iche na-achọ, ma dị irè. Teknụzụ ọkụ ọkụ arụmọrụ maka arụmọrụ dị iche iche. Mee ngwa ngwa dochie nnukwu ọkụ ọkụ gị na ọkụ E39 anyị. Ezubere maka nnukwu ihe eji eme ihe gụnyere mgbidi mgbidi, ọkụ ọkụ dị...
Ahịa Ụlọ Ahịa Ọkụ Ọkụ Mkpụrụ 120W
Ahịa Ahịa Ọkụ Mkpụrụ Ahịa E40 Isi / Large Mogul Style LED CORN BULB . Mfe Ego Efere na E39 ada ọka ìhè : 360 Degree LED Corn Light Output Kacha ọhụrụ LED Technology: SMD2835 ikanam na 50,000 Ndụ 110-277 Volt dakọtara (110, 208, 240, 277vac niile dị mma) edu ọka cob bọlbụ : Bright white 5000k color led grain light Azụ...
100W Egwuregwu Ngwá Agha Ndị Na-ahụ Maka Ọkụ Mmiri Fixtures
Site n'iji ogo 3030, 100w Canopy Light Fixture na- anọchite anya ìhè 300W ma ọ bụ ìhè 300W HID, chekwaa 3,382.5 na ụgwọ ume, chekwaa ruo 88% na ego nke ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ gị. Ngwá Agha Ngwá Agha Anyị Ngwado bụ Ngwá ngwongwo nke ígwè na ntanetị na-adịgide adịgide, IP65 nke mmiri na-adịghị na mmiri maka ebe...
150W Ọkụ Ngwá Agha Soffit Luminaire Gas Station Light
The 150W LED ikanji ọkụ nnọchi ke ikanam integrates akwa arụmọrụ na àgwà na a obere ihe ngosi. Site na ijikọta Meanwell Driver na Philips LED Chips, ebe nchekwa 150W Gas Station na- enye mpempe ọkụ dị elu na ego na ume na mmezi. Soffit Luminaire Gas Station Light DLC depụtara.
Ụlọ ọkụ Tennis Tennis 1000w anyị nwere 130000LM Ọdịdị Dị Elu! Nchapụta dị ọtụtụ ugboro dị elu karịa ọkụ ọkụ ọdịnala, ma ị nwere ike ichekwa ọkụ eletrik 70%. Ụlọ Egwuregwu Ụlọ Egwuregwu a nke ime ụlọ ọkụ Emitting angle dị ogo 60, iji nyekwuo anya irradiation dịkwuo na ọkụ ọkụ. Ihe nkpuchi ahụ na-eji nnukwu ikuku pc...
75W Ebube Motion Egwuregwu Ịgba Ọkụ Na-enwu Ogologo Mmiri
Nke a na-eji ọkụ ọkụ na-egbuke egbuke nke Philips SMD 3030. 75W Low Bay Lighting nwere ike ịbụ nke kwekọrọ na 200-250W HPS / HID. The Low Bay Light Fitting bụ Egwuregwu Ultra-thin, na-eji ụdị ihe ọhụrụ, modular, obere-profaịlụ imewe. Anyị na-eji ọkwọ ụgbọala ike ikuku voltage dị 100-277V AC 50 / 60Hz na-enye gị ọtụtụ...
Mgbidi Ịgba Ọkụ na-ekpuchi n'èzí 75W
Ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ anyị nwere 75w na-enye 9000 Lumens na 5000K Light White. Mgbapụ ndị na-ahụ maka ebe gas dika ndi-mọ-ozi nādakwasi gi. Dịbaa ụgwọ kọmputa gị ruo na 84%, 250W HPS / HID dochie ya na 75W N'èzí Canopy Lighting Fixtures . Ntụle ndụ nke awa 50,000-ugboro atọ ka MH na-edozi, ihe mkpuchi ọkụ a na- ebelata...
Ọkụ Eaton Ọkụ Kasị Ọkụ Mast Mbara Ọkụ Elu Uhie Ọkụ ọka E27 Led Ọkụ Mbara Amazon Ọka Ọkụ Na-enwu 75W Ọkụ Eluigwe